काठमाडौं, २८ कात्तिक । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अझै आएको छैन । तर ९९ प्रतिशत मत गणना भइसकेको र बाँकी मतले परिणाम उल्टने कुनै सम्भावना नभएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुको भनाई छ ।
जो बाइडेनले २९० निर्वाचक मत र ट्रम्पभन्दा ५० लाख भन्दा बढी लोकप्रिय मत पाइरहेका छन् ।
बाइडेनलाई विश्वका अधिकांश नेता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुले बधाई दिइसकेका छन् । बाइडेनले जनवरी २० मा सत्ता सम्हाल्नका लागि तयारी शुरुवात गरिसकेको बताइन्छ ।
तर, ट्रम्पले भने अझै हार स्वीकार गरेका छैनन् । उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् । धाँधली भएका राज्यहरुमा कानुनी लडाई लड्ने र पुनर्मतगणना गराउने उनको भनाई छ । उनले ट्वीटरमार्फत् आफूहरुले जित्ने भन्दै समर्थकहरुलाई उत्साहित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी इतिहासमा करिब २०० वर्ष यता यस्तो घटना भएको थिएन । निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्ने र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन रहिआएको थियो ।
ट्रम्पको सत्ता नछोड्ने घोषणासँगै अमेरिकाभित्र र बाहिर चिन्ता बढेको छ । ट्रम्पले धम्क्याएर आत्मरति मात्र गरेका हुन वा साँच्चै सत्ता नछोड्ने हुन् भन्ने द्विविधा सृजना भएको छ ।
वास्तवमा ट्रम्पले के गर्ने हुन् भन्ने पुष्टि हुन जनवरी २० को बिहानसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पले साँच्चै सत्ता नछोडे चाहिँ के के हुन सक्दछ ?
एकाथरी विश्लेषकहरुका अनुसार ट्रम्पले त्यस्तो गर्न सक्दै सक्दैनन् । अमेरिकी संविधान र प्रचलनले उनलाई सत्ता नछोड्ने कुनै ठाउँ दिँदैन । निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा अन्तिम परिणामको घोषणा नगरुन्जेल उनले हार स्वीकार नगर्नु खासै आपत्तिजनक हैन । जब अन्तिम परिणाम घोषणा हुनेछ, त्यसपछिको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुनेछ ।
निर्वाचन परिणामलाई चुनौति दिँदै अदालत जानु ट्रम्पको अर्को उपाय हो । तर, ट्रम्प अदालत जाँदैमा उनले चाहेजस्तो हुन सक्दैनन् । अदालतले खासखास ठाउँमा पुनर्मतगणनाको आदेश दिन सक्दछ तर निर्वाचन परिणामलाई उल्टाउन र ट्रम्पलाई विजयी घोषणा गर्न सक्दैन ।
अर्कोथरि विश्लेषणहरुका अनुुसार ट्रम्पले अहिले भनिरहेको कुरा खासै महत्वपूर्ण हैन । त्यो राजनीतिक आत्मरति मात्र हो । जनवरी २० मा उनले के गर्दछन्, त्यो महत्वपूर्ण हो । परम्परा अनुसार ट्रम्पले बाइडेनलाई पत्राचार गरेर ह्वाइटहाउस बोलाउनु पर्ने र सत्ता हस्तान्तरण गरेको घोषण गर्दै त्यही दिन बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
मानौं कि ट्रम्पले त्यसो गरेनन्, अब के हुन सक्दछ ? त्यसपछि दुई विकल्प हुने छन् ।
पहिलो विकल्प जनवरी २० पछि सुरक्षा निकायले नै ट्रम्पलाई गिरफ्तार गर्न सक्दछ । ट्रम्पलाई ह्वाइटहाउसबाट खेद्न सक्दछ । जनबरी २० को बिहानपछि अमेरिकी सुरक्षा निकायले ट्रम्पको आदेश नमान्न र बाइडेनको आदेश मान्न सक्दछन् ।
अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरु देशको संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक प्रचलनप्रति प्रष्ट भएको हुँदा ट्रम्पले त्यस्तो साहस नगर्न सक्दछन् ।
मानौं कायम राष्ट्रपतिका रुपमा सुरक्षा अधिकारीले ट्रम्पकै आदेश मानिरहे, त्यसो भए के होला ? यो अमेरिकी लोकतन्त्रको नयाँ संकट हुनेछ । त्यस्तो भएमा जनान्दोलनबाट ट्रम्पलाई सत्ताच्युत गर्नुको अर्को कुनै विकल्प रहने छैन ।
सत्ता छोड्ने बेलामा रक्षामन्त्री मार्क एस्परलाई बर्खास्त किन गरिएको हो ? यो अर्को रहस्य बनेको छ । ट्रम्पले सेनामा नयाँ प्रकारको ‘कू’ को सेटिङ त गरिरहेका छैनन, यस्तो आशंका पनि बाक्लो हुँदैछ ।
त्यसो भएमा सम्भवत डेमोक्र्याटिक पार्टीले देशभरि जनप्रदर्शनको आव्हान गर्ने छ । बाइडेन समर्थकले प्रदर्शन शुरु गरेमा ट्रम्प समर्थकले पनि प्रर्दशन शुरुवात गर्नेछ ।
ट्रम्प समर्थकहरुले अहिले पनि विभिन्न राज्यहरुमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु पुनर्मतगणनाका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
ट्रम्पले सत्ता नछोडे हुने प्रदर्शनहरु हिंसात्मक हुन सक्नेछ ।
रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताहरुले भने आफ्नो पार्टीको हार स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसले ट्रम्पमाथि थप दबाब सृजना गर्ने छ ।
विश्लेषकहरु भन्दछन्- ट्रम्पको मुड हेर्दा उनले सत्ता छोडे पनि बाइडेनलाई सजिलै काम गर्न दिने छैनन् । कांग्रेसमा भएको रिपब्लिकनहरुको संख्याले बाइडेनलाई काम गर्न निरन्तर अप्ठ्यारो बनाइरहने छ ।